Ndị na-emepụta ihe ọkụ na China - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Akụrụngwa ọkụ
Yli na-emepụta akụrụngwa ọkụ, gụnyere njide ọnụ ụzọ electromagnetic, onye na-achịkwa ike ọkụ maka njikwa nnweta na ngwa ndị metụtara ya. a na-eji ngwaahịa akụrụngwa ọkụ n'ọtụtụ ebe iji gboo mkpa nke njikwa nnweta maka ọpụpụ ọkụ.
N'oge a, ndị mmadụ na-echegbu onwe ha banyere nsogbu ahụ na-adịghị ize ndụ ma na-eme ka ngwaahịa akụrụngwa ọkụ na-ewu ewu ma na-ewu ewu
Ngwa akụrụngwa ọkụ nke Yli rụpụtara bụ akara nke oke mma na China.
YD-601 50kg Basic Wall Mount Door Onye njide
YD-601 bụ ọkọlọtọ ụdị mgbidi ugwu ụzọ njide ihe .which adopts obere ike oriri, na-eme ya ọzọ gburugburu ebe obibi enyi na enyi na ndị ọzọ inogide. The Holding Force (Collinear Load) bụ 50kg (110Lbs) Ọkachamara mgbochi-mmapụta ihe magnetism imewe ana achi achi kasị elu nche.
YD-601L 180kg Basic Wall Ugwu Door njide
YD-601L bụ ọkọlọtọ ụdị mgbidi ugwu ụzọ njide ihe .which adopts obere ike oriri, na-eme ya ọzọ gburugburu ebe obibi enyi na enyi na ndị ọzọ inogide. nwere ike iguzogide 180kgï¼ˆ350poundsï¼ ‰ na-ejide ikike (Collinear Load) .Professional mgbochi residual magnetism imewe ana achi achi kasị elu nche.
YD-602 50kg gbasaa Mgbatị Ugwu
YD-602 bụ Long ụdị mgbidi ugwu ụzọ njide .The ala ike na-ewe imewe, na-eme ka ọ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi na ndị ọzọ inogide. Ọkachamara ọkachamara na-egbochi magnetism na-eme ka nchebe kachasị elu.
YD-602L 180kg Mgbatị Mgbidi Ugwu Mgbatị
YD-602L bụ Mgbatị Mgbidi Mgbatị Agbatị. The ala ike oriri, Pụtara ìhè ya ọzọ gburugburu ebe obibi enyi na enyi na ndị ọzọ inogide. Ọkachamara ọkachamara na-egbochi magnetism na-eme ka nchebe kachasị elu.
YD-603 Mortice Nọkwasịrị Ọnụ orzọ
YD-603 bụ ihe njiri elu ọnụ ụzọ na-efe efe. Akụkụ nke ike ike dị ala na-eme ka ọ nwekwuo mmekọrịta enyi na gburugburu ebe obibi ma na-adịgide adịgide karị. Bọtịnụ ntọhapụ maka nnwale na wuru-na MOV weghachite nchedo ugbu a
YD-603US American Type Wall Mount Door Onye njide
YD-603US bụ a American Type mortise ugwu ụzọ njide. Njirimara nke ike oriri na-eme ka o nwekwuo mmekorita gburugburu ebe obibi ma na-adịgide adịgide. Iji bọtịnụ ntọhapụ nke akwụkwọ ntuziaka